Fududeeyaha Koontiinka Fortnite 2020: Sidee Looga Heli Karaa Harag Iyo Baaritaan Bilaash Ah Fortnite?
Xaqiiqada & Lacagta V ee Xaraashka ah Ma Jirto Soo Saarida Xaqiijinta Aadanaha!
Ma ku qaadatay saacado aad u xanuun badan kombiyuutarka shaashadda raadinta adag Fortnite V Bucks Generator? Xaqiiqdii waxaa kugu filan, waxaa laga yaabaa inaadan ku raaxeysan badideedii. Laakiin markaa, waxaad moodaa inaad tahay nooca qofka aan si fudud quusan. Si farxad leh, waxaad ku muteheysaa in laguugu abaal mariyo adkaysigaaga. Waa sax! Waxa aad hortaada ku aragto waa dhaliyaha ugu fiican Fortnite V Bucks oo aad ka heli karto agagaarkaaga. Waa lacag la’aan, dhakhso, oo lagu kalsoonaan karo sida cadaabta. Waxaa ka sii wanaagsan, noocaan cusub ee Fortnite V Bucks matoor xaqiijin aadane ah aalad-soo-saari kartaa Fortnite V Bucks. Haa, qalabkani wuxuu u furi kara daadka qaddarka aan xadidneyn ee Fortnite V Bucks bilaash ah adigoon ku tuurin gacan iyo lug. Si aad uhesho waxtarka, kaliya waa inaad gasho lambarka la doonayo ee V Bucks, ka dibna sug inta sixirku dhacayo. Si daran, ma aad helikartid ka fudud, halis la'aan, iyo dhakhso dhaliyaha Fortnite V Bucks ee da'da maanta iyo waqtiga. Maaha in la xuso inaadan u baahan doonin inaad u qaadatid sahanno caajis ah sidii ganacsi-ahaan loogu iibsado 'Fortnite V Bucks' oo bilaash ah. Tan Fortnite V Bucks dhaliyaha wax sahan ah malahan Qalabka kuma kici doono wax lacag ah. Sidaad u sheegi karto, xirfadaha loo adeegsado matoor guud gebi ahaanba malahan. Maxaad ka filan kartaa koronto-dhaliye noocan ah? Asal ahaan, ma jirto hab aad dareenkaaga dhaawac u geysan kartid adoo ku tooganaya matoor-keenahan. Xaqiiqdi, runtii waxaad noqon doontaa lataliye dhaliyaha. Haddii kale, waxaad ugu yaraan noqon doontaa macaamiil soo noqda!
Tani waa matoorkii ugu dambeeyay ee cusbooneysiinta ee suuqa. Si ka duwan aaladaha kale ee la midka ah, matoorkani wuxuu awood u leeyahay inuu dhiibo tiro aan xadidneyn oo lacag xoog leh ah. Marka, kuma koobna xadidid, taas oo ah waxa runtii kala soocaya matoorkan naxdinta leh xirmooyinka inteeda kale. Asal ahaan, waxaad ubaahantahay inaad ka hesho Fortnite V lacag badan qalabkan marka loo fiiriyo koronto-dhaliye kasta oo u dhigma halkaas, oo kuu ogolaanaya inaad ku raaxeysatid oo aad ciyaarta sida ugu fiican waligaba. Sidee qabow taasi waa? Marka, waad is dejin kartaa oo abaal marinta waad heli kartaa adigoon walwal qabin. Sidii horeba loo mooday, kuma lihid waxad kubixin kartid waqti ama hal daqiiqo. Si daran, isbeddelkan cusub ee Bilaash V ah Ma Jiro Nolol Xaqiijinta Aadanaha waa bam. Sida laga soo xigtay horumarayaashu, waxaa si gaar ah loogu sameeyay dhammaan ciyaartooyda joogtada ah ee aan dooneynin inay lacag ku shubaan si ay u iibsadaan kaararka dagaalka, gliders, niyadda, iyo bililiqada kale ee la socda qiimaha qiimaha. Erayada soo saaraha, 'Waxaan ognahay inay xanuun badan tahay inaan ku kharash gareeynno lacagteenna sida aadka ah loo kasbaday alaabtan oo kale, sidaas we Ka fikirida abuurida koronto-dhaliyahaan oo aan ku kici doonin qof bilaa lacag ah. Thanks to abuurkooda, dhamaan ciyaartoydu waxay ku heli karaan lacag badan oo dheeri ah boorsadooda. Ka dib oo dhan, maahan inay lacagtooda ku qarashgareeyaan lacagta ciyaarta dhexdeeda. Qaybta ugu fiican waa in matoorku si ballaaran loogu heli karo mid iyo dhammaan.
Hooyo on Home